Fiovam-pisia-maha-izy - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Transsobstansiasiona)
Ny fiovam-pisia-maha-izy na transsobstansiasiona dia fiovan'ny maha-izy ny zavatra iray ho tonga zavatra hafa. Amin'ny Katolika dia fiovan'ny mofo ho tenan'i Kristy sy ny divay ho ran'i Kristy ao amin'ny eokaristia amin'ny alalan'ny Fanahy Masina ny fiovam-pisia-maha-izy, ka midika izany fa ao amin'ny mofo sy ny divay tokoa i Jesoa Kristy.
Atao hoe μετουσίωσις / metousiosis izany amin'ny teny grika, ary transsubstantiatio amin'ny teny latina. Ny teny hoe transsubstantiatio dia efa nampiasain'ny Fiangonana katolika tamin'ny taona 1215 nandritra ny konsily fahefatra natao tao Latràna sady nohamafisin'ny konsily tao Tridentio.
Ny fiovam-pisia-maha-izy, ao amin'ny teolojia katolika dia foto-pampianarana ilazana fa amin'ny fanamasinana ny eokaristia dia miova ho tena (nofo) sy ran'i Kristy marina tokoa ny mofo sy ny divay, na dia tsy miova aza ny endrik'ireo singa ireo. Ny tena zava-misy (ny fisia-maha-izy) dia tsy mofo sy divay intsony fa ny tena aman-dran'i Kristy izay miara-misy ao anati'izy ireo sy miaraka amin'izy ireo, izay samy mitahiry ihany ny endriny ivelany. Samy mampianatra zavatra mitovy amin'io ny Ortodoksa sy ny Anglikana nefa tsy mampiasa ny teny hoe transsubstantiatio .
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiovam-pisia-maha-izy&oldid=980259"
Voaova farany tamin'ny 29 Janoary 2020 amin'ny 17:20 ity pejy ity.